စက်မှုကုန်လှောင်ရုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆောက်လုပ်ရေးထုတ်လုပ်သူများ China Industrial Warehouse Workshop Building ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ
သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံသည်အဓိကအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဆောက်အအုံအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်သံမဏိတိုင်များ၊ သံမဏိရောင်ခြည်နှင့် purlin များပါဝင်သောကြောင့်သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သံမဏိအလုပ်ရုံအဆောက်အအုံ၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သံမဏိအလုပ်ရုံ၏ခေါင်မိုးနှင့်နံရံများသည်အမျိုးမျိုးသောပြားပြားပုံစံများကို အသုံးပြု၍ အတူတကွစုဝေးသောအခါထပ်တူကျခြင်းမရှိဘဲထပ်နေလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်အလုပ်ရုံသည်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သီးခြားနေနိုင်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတိုတောင်းသောကြောင့် ...
တရုတ်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတိအကျပေးနိုင်သည်။ တည်ဆောက်ပုံကိုဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သံမဏိကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်ပြီးသင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေတစ်ခုကိုပေးနိုင်သည်။ SGS အသိအမှတ်ပြုသံမဏိ prefab ဂိုဒေါင်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ SGS အသိအမှတ်ပြုအလင်းသံမဏိ prefab ဂိုဒေါင်အဓိကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိသံမဏိ H Sectio ...
Prefabricated အဆောက်အ ဦး သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ခြံများသွန်းလောင်းခြင်းအဓိကတည်ဆောက်ပုံသံမဏိသံဂဟေဆော် H အပိုင်း Purlin စီအပိုင်းလိုင်း (သို့) ဇအပိုင်းလိုင်းခေါင်မိုးအဖုံးသဲဒ့်ဝစ်ဘောင်သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာဖန်သားမွှေးကွိုင်နံရံပတ်ရစ်သံမဏိပြားနှင့်သံမဏိသံမဏိတိုင်သံတိုင်များပတ်ပတ်လည်ဘားကော်လံ & Transverse Brace Angle သံမဏိသို့မဟုတ် H အပိုင်းသံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိပိုက်ဒူးထောင့်ထောင့်သံမဏိခေါင်မိုးပြောင်အရောင်သံမဏိသိုး ...
နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters: 1 ။ အဓိကသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး: welded H steel, hot-roll H H သံမဏိ ၂ ။ Purlin: c-type သံမဏိသို့မဟုတ် Z-type သံမဏိ ၃။ ခေါင်မိုး panel - corrugated သံမဏိပြား၊ sandwich panel သို့မဟုတ် corrugated သံမဏိပြားများသည် wool coil ပါသောနံရံ ၄ ။ မြှောင်းပုံသံမဏိစာရွက်သို့မဟုတ်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို 5. လည်စည်းဘား: welded- ပတ်ပတ်လည် tube6 ။ သတ္တုအထိမ်းအချုပ်: သံမဏိပတ်ပတ်လည်7။ Column Brace and lateral brace - ထောင့်သံမဏိသို့မဟုတ် H အပိုင်းသံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိ pipe8 ။ ချီစက်: 3T-100T9 ထောင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်: ထောင့် steel10.flashing: မြှောင်းပုံသံမဏိစာရွက် 11. Gu ...